Hay’ada MSF oo xiray dhamaan xafiisyadeedii ay ku lahayd Somalia – idalenews.com
Hay’ada MSF oo xiray dhamaan xafiisyadeedii ay ku lahayd Somalia
Waxaa goordhow shir jaraa’id ku qabtay magaalada Nairobi madaxa ugu sareeya hay’adda dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ee MSF kaasoo sheegay in la xirayo dhammaan xafiisyadii hay’adda ee Soomaaliya.
Masuulka ugu sarreeya MSF Dr. Unni Karunakara ayaa shaaca ka qaaday in dhibaatada amni ee ka heysata Soomaaliya oo ay ku jirto Somaliland inay ku qasabtay inay isaga baxaan Soomaaliya oo dhan.
Wuxuu sheegay in laga bilaabo ay hay’addu xirtay xafiisyadii Muqdisho, Balcad, Jowhar, Jilib, Gaalkacyo, Mareeray, Burco iyo Dayniile oo dhammaan ay ku yaallen xarumo caafimaad oo haweenka iyo carruurta lagu daryeelo.
Madaxa MSF Dr. Unni Karunakara wuxuu ka cawday in maamulada iyo dawlada Soomaaliya aysan ka hadlin, waxbana ka qabanin afduubyada tirada badan ee lagula kacay shaqaalaha MSF kuwaasoo ay ugu dambeeyeen labo haween ah oo dalka Kenya laga afduubtay.
Dawlada Soomaaliya iyo maamulada kale ee dalka weli kama aaney hadlin arrintan oo goordhow lagu dhawaaqay balse waxaa hubaal ah in si weyn looga dareemi doono deegaano badan oo gudaha ka mid ah halkaasoo dad fara badan ay ka heli jireen adeegyo caafimaad oo lacag la’aan ah.
Daawo Militariga Masar oo Xasuuq u gaystay madaxweynihii la riday ee Masar Max’ed Morsi + Sawiro